December 2016 - Ceelhuur Online
December 31, 2016 December 31, 2016 admin248
Xilli abaaro ba’an oo dadka iyo duunyada saamayn ku yeeshay ay ka jiraan gobolka Galgaduud ayaa maamulka deegaanka Galinsoor waxa uubilaabay in biyo dhaamis loo sameeyo tuulooyinka ku hareeraysay magaaladaas, halkaas oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah oo soo gaari waayay meelaha biyaha leh. Xoolaha ayaa u dhimanaya harraad iyo gaajo, waxaana […]
Taliye ku xigeen Villa Somalia oo lagu dilay gudaha Madaxtoyada (Sawirro)
December 31, 2016 December 31, 2016 admin150
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in goor dhow Xarunta Madaxtooyada dhexdeeda lagu dilay Taliye Ku Xigeenkii Ciidanka Ilaalada ee Madaxtooyada Gashaanle sare Cabdi Cabdulle Qoorgaab. Sarkaalkan, ayaa waxaa dilay askari ka tirsan Ilaalada Madaxtooyada, iyadoo laba askari oo kalana uu goobtaasi ku dhaawacay. Askarta dhaawaca ah, ayaa waxaa la soo sheegaya in […]
Burundi oo ku hanjabtay in ay ciidankeeda si deg deg ah ugala baxeyso Soomaaliya hadii…
December 31, 2016 December 31, 2016 admin158
Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay in ciidankeeda ay deg eg ugala bixi doonto Somaliya, kadib markii ay dowladdaasi sheegtay in ciidamadan aysan helin wax mushaar ah muddo bilo ah. Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa Jimcihii ku hanjabay in ciidamo gaaraya 5,500 askari oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Africa ee Amisom ay Somaliya kala soo […]
December 31, 2016 admin187
December 29, 2016 Duceysane173
Guddigga Gurmadka Abaaraha ee heer Qaran, ayaa kulan looga hadlaayey dardar gelinta hawlaha gar-gaar ee ay u baahan yihiin dadka ay Abaaruhu saameeyeen la yeeshay UNka, deeqbixiyayaasha, iyo hay’adaha caalamiga ah, Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in shirkii ugu horeeyay ee guddiga ay kaga hadleen sidii loo diyaarin lahaa hal qorshe oo […]
December 29, 2016 Duceysane151
Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in todobaadyada soo socda ay mar kale joojiso Qaadka laga keeno dalka Kenya, kaddib markii dowladda Kenya ay dhaqan gelin weysay heshiiskii 13-kii bishii September ee sanadkan. Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay ceelhuur.com in dowladda ay ka fikireyso go’aan ay ka qaadato Qaadka laga […]
Booliska Galmudug oo soo qabtay nin dil Ka geystay Camaara
December 29, 2016 admin163
Ciidamada Booliska dowlad goboleedka Galmudug, ayaa gacanta ku soo dhigay nin dil ka geystay deegaanka Camaara ee gobolka Mudug. Saraakiisha ciidamada Booliska ayaa sheegay ninkaan inay ku daba jireen, kadib markii uu laba maalin ka hor uu deegaanka Camaara ku dilay nin lagu magacaabi jiray Axmed Shiil oo u shaqeynaayay Hay’adda ICRC. Taliye ku xigeenka […]
Mid ka mid ah Ergadii doorashadii Cadaado oo Muqdisho lagu dilay
December 29, 2016 December 29, 2016 admin151
Kooxo Bistoolado ku hubeysan ayaa xalay fiidkii ku dilay xafaada Huriwaa ee magaalada Muqdisho marxuum Axmed Dhoorre Raage oo ka mid ah ergadii magaalada Cadaado ku doortay xildhibaanada cusub. Marxuumka oo ayaa xiliga la dilayey kasoo baxay masjid ku dhow gurigiisa, waxaana da’diisa lagu sheegay 80 jir, waxa uuna ka mid ahaa ergadii beesha Saruur […]
December 29, 2016 admin149
Warmurtiyeed xalay kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madasha Hoggaanka Qaran ay dib u dhigeen xulashada 18 kursi ee lagu kordhiyey aqalka sare ilaa inta ay ka dhamaaneyso dhismaha dowlada cusub. Dastuurka kumeelgaarka ee dalka ayaa dhigaya in tirada xubnaha aqalka sare yihiin 54 xildhibaan, waxaana 18 xubnood ee madashu ku dartay lagu […]
December 28, 2016 December 28, 2016 admin252
28-ka december maalin MURUGO iyo GOCOSHO badan! Maalmuhu ka la wanaagsan, dadkuna ka la aayan wacan, shucuubtuna kala aayo hagaagsan, adduunkuna waa mareeg maalmuhu ku wareegaan, maalmuhu waxay isugu jiraan: qaraar iyo macaan, xun iyo wanaagsan, madow iyo cad, murugo iyo farxad, jaadadkaas maalmaha waxay yihiin hadba sida ay u soo marto qofka, bulshooyinka, shucuubta, […]